Wolziger See Izindawo Eziqashwayo Zeholide & Amakhaya - Blossin, Heidesee, i-Germany | Airbnb
Vacation rentals in Wolziger See
Izindawo eziqashwayo zeholide ezinconywa kakhulu e- Wolziger See
“Sajabula kakhulu ukuba izivakashi zikaGabi. Indlu mihle kakhulu futhi inothando ngemininingwane futhi sasinakho konke esikudingayo. Indlwana le itholakala maphakathi nehlathi futhi ifakelwe uthando. Konke kwakuhlanzekile impela futhi bekukhona ngisho nezimbali ezimbalwa ezikhethwe ekhaya ukusibingelela etafuleni. Ngijabule kakhulu futhi.”
Amasevisi athandwayo ase- Wolziger See ezindawo eziqashwayo zeholide
Ezinye izindawo ezinhle eziqashwayo zeholide e- Wolziger See
SUPERHOSTIndlu eyakhiwe yamapulangwe yonke4.7 (66)
SUPERHOSTI-bungalow yonke4.94 (36)
I-bungalow yonke4.67 (18)
SUPERHOSTIndlu eyakhiwe yamapulangwe yonke4.82 (101)